Xog: Maxay tahay sababtii keentay inuu is caliso agaasimihii hab maamuuska Madaxtooyada - Hablaha Media Network
Xog: Maxay tahay sababtii keentay inuu is caliso agaasimihii hab maamuuska Madaxtooyada
HMN:- Waxaa saakay waraaqda is casilaadka gudbiyey Siyaad Maxamuud Shire oo ahaa agaasimihii hab maamuuska Madaxtooyada Villa Soomaaliya oo uu xilkaas u magacaabay Madaxweyne Farmaajo.
Haddaba waxaa isla markiiba falanqeyn lagu bilaabay sababta keentay inuu iska casilo xilkaas maadaama dhawaan loo magacaabay.
Arrintaan koowaad ee keentay inuu ninkaan is casilo ayaa lagu sheegay inay tahay maadama uu awalba xilkiisa ahaa mid kumeel gaar ah.
Sidoo kale dadka falanqeeyo siyaasadda ayaa sheegayo inuu ninkaan fuulay culeys badan maadaama uu la kulmay eedeemo ku aadan inuu ka qeyb qaatay xasuuqii ciidamada Itoobiya u geysteen shacabka Soomaaliyeed sanadkii 2007.
Dhanka kale waxaa soo baxayo war sheegayo inuu ninkaan raadinayo xil kale oo aan indho badan lagu heyn wuxuuna hadda bilaabay inuu qabto shaqooyin kale.
Tan iyo markii ninkaan xilkaan loo magacaabay waxaa ku socotay eedeemo badan taasoo markii dambe keentay inuu madaxweynaha bartiisa Twitterka kusoo qoro inuu xilkaan loo magacaabay yahay mid kumeel gaar ah.